Iiraan oo wacad ku martay inay u aari doonto Mohsen Fakhrizadeh - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Iiraan oo wacad ku martay inay u aari doonto Mohsen Fakhrizadeh
November 28, 2020 admin756
Iiran ayaa wacad ku martay inay ka aargoosan doonto kuwii ka dambeeyay dilkii loo geystay Seynisyahankoodii ugu sareeyay ee dhanka Niyukleerka, Mohsen Fakhrizadeh, oo shalay la dilay.
Saraakiil kale oo reer Iiraan ah ayaa waxay dhankooda dilkiisa ku eedeeyeen inay masuul ka tahay Israa’iil oo ay ka dambeyso. Waxay ku hanjabeen saraakiishani inay u aargudi doonaan Seynisyahankan shalay lagu dilay meel u dhaw magaalada Tehran ee caasimada iiraan.
Israa’iil wali kama aysan jawaabin eedeeynta loo soo jeedayay, balse waxay horey Israa’iil u sheegtay in Mr Fakhrizadeh uu yahay maskaxda ka dambeysa barnaamijka qarsoodiga ah ee Niyukleerka Iraan. Hay’adaha sirdoonka reer Galbeedka ayaa rumeysan in Fakhrizadeh uu ahaa shaqsiga ka dambeeyay barnaamijka qarsoodiga ah ee Niyukleerka Iiraan.
Dowladda Iiraan ayaa falka lagu diley Seynisyahankeeda ku tilmaamtay mid jabaneya shuruucda caalamiga ah, islamarkana mudan in la cambaareeyo.
La taliyaha hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Khamenei, ayaa ballanqaday inay weerar sida “sida biriqda oo kale” ay kaga aargoosan doonaan kuwa isku dayaya inay abuuraan dagaal toos ah.
Bayaan ay Jimcihii soo saartay wasaarada gaashaandhiga ayaa lagu sheegay: “argagixiso hubeysan ayaa bartilmaameedsatay gaari uu la socday Mohsen Fakhrizadeh, madaxa cilmibaaridda iyo hal-abuurka ee wasaarada.
“Ka dib isku dhac dhexmaray argagixisada iyo ilaaladiisa, Mr Fakhrizadeh ayaa waxaa haleelay dhowr xabo oo rasaas ah islamarkana waxaa loola cararay isbataalka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda.
“Nasiib daro dadaalkii ay u galeen dhkaaatiirta badbaadintiisa ayaan lagu guuleysan islamarkana daqiiqado ka dib wuu geeriyooday,” ayaa intaa lagu daray. Warbaahinta Iran ayaa sheegtay in dadka weerarka geystay ay rasaas ku fureen gaariga Seynisyahankani.
Dowladda Iraan ayaa ugu baaqday xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey iyo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey inay cambaareeyaan dilkii lo geystay Seynisyahan dhanka Niyukleerka ah oo shalay al dilay.
Inaad UN-ka u shaqeyso ma ahan inaad dadka ugu xirfad iyo caqli badan tahay
G. Banaadir iyo Wasaaradda Caafimaadka oo isku heysta Buugga Caafimaadka